नेपाल र भारतबीच ७२ स्थानमा सीमा विवाद, १८ सय किलोमिटर सीमामा ४३ सय ५० प्रहरी ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नेपाल र भारतबीच ७२ स्थानमा सीमा विवाद, १८ सय किलोमिटर सीमामा ४३ सय ५० प्रहरी !
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दार्चुला कालापानीसम्मको सीमा विवाद लामो समयदेखि हल हुन सकेको छैन । दशगजा अतिक्रमणदेखि पिल्लर हराउनेसम्मको अवस्था नेपाल–भारत सीमामा छ । भारतसम्म जोडिएको नेपाली सीमाको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ त ?
१८ सय किलोमिटरमा जम्मा ८७ विओपी
इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म पुग्दा नेपाल–भारत सीमाको दूरी १८ सय किलोमिटर छ । नेपातर्फको सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिइएको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको कुल जनशक्ति ३७ हजार १ सय २४ जनामात्रै हो । सीमामा हुने अपराध, अतिक्रमण र नियमित सुरक्षा गस्तीका लागि परिचालित हुने सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न १३ वटा काममा लगाइँदै आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका २१ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय छ । सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रायः सदरमुकाम क्षेत्रमा छ । एउटा सीमा सुरक्षा कार्यालयमा २ सय ५० जनाको जनशक्ति हुन्छ । जिल्ला सुरक्षा महातत ८७ ओटा विओपी (बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट) छन् । एउटा विओपीमा ५० जनाको युनिट हुन्छ । विओपी युनिटले नै सीमाको निगरानी, गस्ती र सुरक्षाको कार्य गर्ने सशस्त्रका डीआईजी तथा प्रवक्ता बाबुराम पाण्डे बताउँछन् ।
जिल्ला सुरक्षा कार्यालयको जनशक्तिलाई आधार नमान्ने हो भने भारतसँग जोडिएको १८ सय किलोमिटरमा जम्मा ४ हजार ३ सय ५० जना हुन्छ । यो सीमा सुरक्षाका लागि न्यून जनशक्ति भएको सशस्त्रको भनाइ छ ।
नेपालमा २१ किलोमिटरमा, भारतमा ५ किलोमिटरमा विओपी
भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा औसतमा प्रत्येक ५ किलोमिटरमा एसएसबी क्याम्प राखेको छ । यसरी हेर्दा उसको ३ सय ६० वटा एसएसबीको ग्रुप देखिन्छ । एउटा विओपीमा ५० जनाको दरले सामान्य हिसाब गर्ने हो भनेपनि ३ सय ६० युनिटमा १८ हजारको संख्यामा जनशक्ति देखिन्छ । नेपालमा त्यसको तुलनामा जनशक्ति कम एकातिर छँदैछ, सँगसँगै नेपालतर्फको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलको विओपी प्रत्येक २१ किलोमिटरको दूरीमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ६१३ पत्रकारको दुर्घटना बिमा
‘सशस्त्रलाई दोब्बर जनशक्ति आवश्यक’
सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई संघीयतापछिको व्यवस्थापन गर्न दोब्बर अर्थात् कायम ३७ हजार जनशक्तिमा थप त्यति नै जनशक्ति माग गरेको छ । सीमा सुरक्षाका लागि प्रत्येक ५ किलोमिटरमा एउटा विओपी क्याम्प राख्ने हो भने झण्डै १४ हजार जनशक्ति अझै आवश्यक पर्ने सशस्त्रको भनाइ छ । ५ किलोमिटरको दूरीमा एउटा विओपी राख्ने हो भने ३ सय ६० वटा विओपी चाहिन्छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षासहित विपत् व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत १३ जिम्मेवारी दिएको छ । ३७ हजारको जनशक्तिबाट सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक गर्न गाह्रो भएको सशस्त्रका उच्च अधिकारी बताउँछन् । हाल विओपी चितवनपूर्व बढी केन्द्रित छ भने चितवनबाट कञ्चनपुरसम्म निकै न्यून संख्यामा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराएको भए पनि सार्थक पहल नभएको सशस्त्रको गुनासो छ ।
१,चैत्र.२०७४,बिहीबार १२:०० मा प्रकाशित
← ‘काठमाडौंमा दुर्घटनामा परेको विमानका पाइलटले राजीनामा दिइसकेका थिए’
जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा १३ वर्षीय बालक प्रहरी नियन्त्रणमा →